4 Su'aal Aad Ku Cabiri Karto Farxada Xariirkaada? - iftineducation.com
4 Su’aal Aad Ku Cabiri Karto Farxada Xariirkaada?
iftineducation.com – intoow la egyahay farxada xariirka, adiga iyo lamaanahaaga? Waxaad ku cabiri kartaa afar su’aalood. Cilmi baaris ayaa soo bandhigtay lahaanshaha lamaane qalbi dabacsan oo wax walba kula qeebsanaayo, ayaa waxoow ka dhigaa xariirka mid kasii wanaagsan kana farxadbadan.
Hadaba waa kanaa afarta su’aal ay u isticmaaleen cilmi baarayaasha kasocda Jaamacada Virginia( cilmibaaris The National Mariage Project) ee ku cabiraayeen caadada iyo wax isla qeebsiga lamaanayaasha heesta waxey ku adkeeyaan xariirkooda iyo farxadooda:
Imisa jeer baad usoo bandhigtaa dareenkaaga ama aad u sheegataa jaceyl lamaanahaaga?
Imisa jeer baad usoo bandhigtaa intow la’ egyahay tixgalinta ay kaa mudantahay iyo amaanta lamaanahaaga?
Imisa jeer baad u sameysaa wax yaabo yar-yar, sida inaad u sameyso shaah subaxi ama aad ka caawiso holaha guriga?
Imisa jeer baad cafis weydiisataa inta jeer aad qaladaad, is afdhaaf, been iyo waxyaabo yar-yar kaloo aad sameysay lamaanahaaga?
Jawaabaha su’aalahaan kor way kala duwnaan karaan qof walbo. Wax walbey ahaato Jawaabtaada, furaha kowaad ayaa wuxuu yahay istixgalin, qalbi dabacsanaan, iyo iscafin ayaa waxey keeneysaa guul weyn farxada lamaanayaasha awgeed.
Nasiib darase, Lamaanayaal badan ayey ku adagtahay iney hirgaliyaan arintaas shaqsi ahaan, ama dhinaca kale aanan isku jeedin in shaqsi ahaantiisa is xilqaamo noqdo qof wax bixiya, xata aanan siiney jaaniska lamaanihiisa iney bixiso.
Walow, aad dhaliili karto su’aalahas kor, in wax muhiim aysan aheyn, hadii aadan sameynin afartaas su’aal boqol kiiba boqol maalin walbo, waxaad mudan tahay in lagu tiimbareeyo inaa tahay lamaane xun. Isku soo bandhigida jaceel, isfahanka guud ee baahida lamaanaha iyo wax isla qeebsiga wwaxey u baahantahay in lisku soo bandhigo maalin walbo. Hadii aad u baahantihiin inaad noqotaan lamaane farxad kuwada noolaada.
Yeysan noqon in xariirkiina bur buro adinko is eedaaya midba midka kale.
Macnaheeda ma’ahan hadi lamaanahaaga mar walbo ku dhihin jaceel ama kuu soo jeedin amaan, aytahay calaamada burburka xariirka. Sidaas ay tahay waxa weeye intay la egtahay adiga iyo lamaanahaaga inaad barataan inaad wax isla qeebsataan, waxaa kasii muhiimsan inaad kor u qaadaan qiimaha xariirka iyo farxada lamaanaha. Inaad barato wax laqeybsiga lamaanaha, afarta su’aal haday waxey idiin tahay bilow wanaagsan.
xigasho: Your Tango
Baro Dalkaaga Hooyo – Cimilada Soomaaliya
Sheeko Xariir – Dhegdheer iyo Fariido